27 Sannadood Kaddib Xuska Dabaaldega Munaasibadaa Aasaaska Ciidanka Qaranka Somaliland Iyo Xusuusta Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
27 Sannadood Kaddib Xuska Dabaaldega Munaasibadaa Aasaaska Ciidanka Qaranka Somaliland Iyo Xusuusta Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani
“Koonfurta Marakaynu Isku Biiray Ma Lahayn Ciidan Millateri,” Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani
Hargeysa(ANN)-Xuska Sanad Guurada 27-aad ee Aas-aaska Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo maanta ku beegnayd ayaa si weyn looga xusay dhamaan gobolada dalka, isla markaana ciidanka qaranku ku soo bandhigeen waxii u qabsoomay sannadkii la soo dhaafay iyo qorshadooda sannadkan cusub ee 2021.
Taliyaha Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, Sareeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo khudbad ka jeediyey xuskii sannadguurada 27aad ee aasaaska ciidanka ayaa sheegay in ciidanku fuliyeen 95% waajibaadkii ay u xilsaarnaayeen, marwalbana diyaar u yihiin ilaalinta nabadgelyada shacabka Somaliland.
Qolada Koonfureed ma lahayn ciidan millateri waxay lahaayeen ciidan booliis ah, midowgeenii waxuu keenay inay booliiskoodi ciidan ka soo wareejiyaan, ka dibna ciidamadeenii halkan joogay inta la qaaday macalimiin tababar u noqdaan. Ereybixinta gaardiga ciidamada loo isticmaalo ciidankii Somaliland scouts ayaa u sameeyey koonfur.
Mar uu ka hadlayey Taliye Nuux noocyada tababarka sannadkii la soo dhaafay ciidamada qaranku soo qaateen ayaa yidhi, “Sannadkii la soo dhaafay dugsiyada tababarka Sheekh iyo Darar-weyne laba xilli ayaa dhiboo cusub ka baxeen. Kuliyadda Saraakiisha Cabdullaahi Askar waxa ka baxay saraakiil aad Madaxweyne adigu u soo xidhay. Waxa dugsiga Darar-weyne ku jira dhiboo cusub, kuliyada Cabdullaahi Askar waxa ku jira saraakiil laba sannadood Itoobiya soo dhamaystay, imikana sannad ku jira. Dugsiga Harag-waafi ee saraakiil-xigeenka waxa ku jira 172 saraakiil-xigeen oo dhamaan gobolada laga keenay, maadama saraakiil-xigeenku yahay lafdhabarka ciidanka.
Dhinaca dhismayaasha cusub ee ciidanka qaranka mar uu ka hadlayey Taliyaha Ciidanka Qaranka ayuu yidhi “ Madaxweyne waxaan xerada Bir-jeex ka rarnay 1500 oo qoys, oo xerada ciidanka degenaa, waxaan uga mahadcelinayaa Wasiirada Daakhiliga iyo Hawlaha-guud, Maayarka iyo ku xigeenka oo aad waxa noogala qabtay. Qeybta Burco waxaan ka saarnay 270 qoys, waxaana laga dhisay saddex dhisme miiska saraakiisha Burco lagu kordhiyey, oo sidaan ugu bixinay miiska saraakiisha Hargeysa Mujaahid Ibraahim Koodbuur, sidaad nagula talisay, aan miiska saraakiisha burco-na ugu bixino magac laga tashado. Ceerigaabo waxaan ka dhisnay guri dabaq ah oo jiif iyo xafiisyo noo ah, maadama marka kormeer lagu tago aanan hudheel degi Karin, inaan samaysanno saldhig.